I-Woven Polyester Strapping | I-Narrowtex
by I-DevNarrowTex	 November 25, 2014
INarrowtex sekuneminyaka eminingi ikhiqiza imikhiqizo yokubopha. INarrostrap yigama elinelungelo lobunikazi elinikezwe uphawu lwethu lwe-premium lokweluka i-polyester okwenziwe ukuthi kube yimpumelelo eqhubekayo njengoba kungaphephile ukusetshenziswa kuphela, kodwa futhi kuyonga, kumunca ukushaqeka nokugqwala mahhala.
I-NARROSTRAP ™ yenziwa ngentambo ephezulu ye-polyester, ehlinzeka ngezinzuzo zamandla aphezulu ngenkathi ithambile ezandleni futhi iphephile ukuyisebenzisa. Ukuluka i-polyester ukubopha kuyindlela ephezulu nephephile kuzo zonke ezinye izinhlobo zokubopha kufaka phakathi insimbi, inhlanganisela, okuxoshiwe, amaketanga nezintambo zocingo.
INarrostrap, enye yezintambo ezibalulekile zokubopha, isetshenziswa ezimbonini ezahlukahlukene kusuka ekuthwalweni kwempahla ekuphatheni nasekuthumeleni, amahlathi, izimboni, ezobunjiniyela, izimayini, ingilazi, ezezimoto, ezolimo, insimbi njll.
Ukuluka i-polyester ukubopha kungaphrintwa ngemibala ehlukahlukene ukukhombisa ubunikazi bezinkampani futhi kuthuthukise ukuqwashisa ngomkhiqizo… igama lenkampani, ilogo, amandla okuphuka. I-NARROSTRAP ™ ingafakwa i-pigmented kunoma yimuphi umbala ukukhombisa… ubunikazi bezinkampani, ukuphuka kwesicelo sokuqina nokuhlukanisa izinhlobo zokusetshenziswa kokuphela
I-NARROSTRAP ™ yenziwa ngokuya ngezinhlelo ezilandelayo zokuphathwa kwekhwalithi:
INarrowtex inelabhorethri yangaphakathi lapho ukuhlolwa okuqhubekayo komkhiqizo, ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, kuvumela ukuhambisana kwekhwalithi nokuvumelana okuhambisanayo.
Ngeminye imininingwane mayelana nokwelukwa kwethu kwe-polyester sicela usishayele kule nombolo (+ 27) 036 352 3108. Ithimba lethu lokuthengisa lizojabula kakhulu ukusiza futhi silindele ukuzwa kuwe.
Ungafunda futhi nendatshana yethu eyedlule: Izimboni Zezimboni.